Zimbabwe Electoral Commission Inotanga Zvakare Kunyoresa Vanoda Kuvhota keKutanga
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, yatanga zvakare hurongwa hwekunyoresa vanhu vachada kuvhota mumatunhu ose emunyika, mushure mekunge komisheni iyi yambomira kuita mabasa ayo nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Hurongwa uhu hunoitwa nguva dzose, asi kubva gore rapera, hwakambomiswa nepamusana pechirwere cheCovid-19.
Vanenge vachinyoresa vanhu vanenge vasvitsa makore gumi nevasere ekuberekwa, uye vanenge vasati vanyoresa mazita avo kuti vavhote musarudzo.
Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu mukuita sarudzo, reElection Resource Centre, rinoti rinotambira hurongwa uhwu nemufaro uye rine humbowo hwekuti mahofisi eZEC mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, Bindura neMutare anga akavhurwa.
Asi sachigaro veElection Resource Centre, VaTrust Maanda, vanoti havasi kufadzwa nekusaitwa kwesarudzo dzekutsiva zvigaro zvisina vamiriri mumatunhu akasiyanasiyana, vachiti ZEC iri kumbunyikidza kodzero dzevanhu nekusaita sarudzo idzi.
Asi komisheni yesarudzo iyi yakazivisa kuti sarudzo idzi hadzisi kuzoitwa pari zvino nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Matunhu akawanda munyika akasara asina vamiriri muparamende pamwe nemumakanzuru zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance nebato reMDC-T pamwe nebato rePeople's Democratic Party zvichitevera kusawirirana kwezvikwata zvemapato aya, uyewo kufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dziri muparamende.
ZEC yakamisa kuitwa kwema by-elections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe.
VaMaanda vanoti sesangano, vachatorawo matanho ekuona kuti ZEC yaitisa sarudzo idzi, vachiti vari kukurukurawo nevakuru pamwe nekunyora magwaro enyunyuto vachikurudzira kuti dai kuvhota kwasunungurwa sezvo iri kodzero dzevana veZimbabwe.
Hurukuro naVaTrust Maanda